Ama-Ultrasonic Homogenizer for Liquid Processing - Hielscher Ultrasound Technology
Hielscher Ultrasonics ngokukhethekile ekuklanyeni nasekukhiqizeni amandla aphezulu Ultrasonic Homogenizers ngoba I-Lab, ibhentshi-phezulu futhi izinga lokukhiqiza. Amandla we-Ultrasonic yindlela ephumelelayo neyasebenza amandla okufaka isicelo ishear ephakeme futhi ukucindezeleka okukhulu uketshezi, u-powder / i-liquid mix and slurries. Lokhu kwenza kube okunye okunamandla kubaxube abaphezulu be-shear, i-homogenizers ephezulu yokucindezela kanye nezigayili ze-bead ezikhungathekile.
Amadivaysi ama-ultrasonic ase-Hielscher asetshenziswa emhlabeni wonke njengabaxube be-laboratory, imishini yokuxuba ephezulu ye-shear, ama-homogenizers noma ama-particle-in-line egcwele ngokugcwele. Izinhlelo zifaka phakathi Ukuxuba, Ukuhlakazeka, kuyizinhlayiyana Usayizi ukunciphisa, Ukukhipha futhi ukuphendula kwamakhemikhali. Sinikeza izingxenye ezihlukahlukene zemboni, njenge nano-materials, upende & Ama-pig, Ukudla & Isisindo, Izimonyo, amakhemikhali futhi amafutha. Funda kabanzi mayelana nathi Amadivaysi futhi izicelo, noma Xhumana nathi manje ngezinhlelo ezilungile ze-ultrasonic zenqubo yakho.
Thintana Nathi Ukuze uthole Ulwazi Olubanzi!
Hielscher inikeza ezahlukene ezahlukene i-ultrasonic lab homogenizers (50 kuya ku-400W) ukuze i-homogenize amasampula kuma-beakers, ama-tubes wokuhlola noma izigaxa. Amaseli egeleza nama-adapter e-flask avumela amasethi amancane asebenzayo ebhokisatri. Ngokuba sonication of izikhumba ezivaliwe, sinikela I-VialTweeter.
I-homogenizers ye-bench-top (0.5 kuya ku-2.0kW) isetshenziselwa ucwaningo lwesicelo, umsebenzi wokulinganisa, ukuhlolwa komshayeli, inqubo yokwenza ngcono noma ukucubungula kwe-batch encane. Lawa madivaysi e-ultrasonic ahlelweyo angahlanganiswa nokugeleza kwamaseli asebenzayo kanye namapompo wokucubungula kwe-inthanethi.
Ngomthamo omkhulu we-in-line processing noma i-batch processing, sinikeza ama-pro-high ultrasonic probes (4 kuya ku-16kW). Ekufakweni kwezentengiselwano, lezi zingakwazi ukugijima kumaqoqo ukuze kusetshenziswe amathani angamakhulu ambalwa ngehora. Imiklamo ye-Sanitary, nama-multi-feeds flow flow cells ziyatholakala ukuze zivumelane nezidingo zakho zokucubungula.
Ngenkathi i i-scale-up yenqubo kusukela ebhokisatri noma ezingeni eliphezulu ekukhiqizeni okugcwele iyisinyathelo esibucayi kunazo zonke futhi esiphikisayo kunabo bonke ubuchwepheshe bokuxuba, kunjalo okulula kakhulu nemishini ye-Hielscher ultrasonic. Lokhu kungenxa yokuthi; ngesikhathi silinganisa asiguquli noma yimiphi imingcele yokushayela, njenge-amplitude noma ingcindezi.
Ukuxubana kwe-batch Ultrasonic isebenza kahle ngamanani amaningi kufika ku-100L ngezinhloso ezithile, kodwa ukuxubana kwe-ultrasonic ku-intanethi kusetshenziswa ukugeleza kwamaseli we-reactors kanye nepompo yokuphakelayo yisisombululo esisebenzayo. Esikhathini sokugeleza kwesisindo amandla e-ultrasonic agxile kakhulu kumthamo omncane okwenza kube ngcono ukufaniswa nokufaniswa komkhiqizo. I-valve ye-back back ingasetshenziselwa ukwandisa ingcindezi esitokisini sokugeleza. Lokhu kuqinisa ukukhulisa i-sonication ngokuyinhloko kuholele ekusikheni kwegazi eliphakeme.
Izinqubo ze-Ultrasonic kanye nezicelo
kuyizinhlayiyana Usayizi ukunciphisa
Izixazululo Zezimboni Ezicacile
Biology kanye Microbiology
I-Paint, Inkino namaPigments
Amakhemikhali kanye nemikhiqizo yokunakekela abantu
I-Fuel, Amandla, Amafutha neGesi
Ukudla, Ubisi Namakhemikhali Ukukhiqiza
Izici kanye nezinzuzo
I-Sonication ku-batch noma i-in-line mode
Izakhi zomsindo omanzi yi-Titanium
Ama-reactors ayinasici (316L) noma ingilazi
Isondlo esincane, akukho ama-orifice amancane
I-ultrasonically isiza ukuhlanza endaweni (CIP)
Umsebenzi we-24hrs / 7days ngaphansi komthwalo ogcwele
Ukulawulwa Kokulawulwa Kwedijithi
Amadivaysi ethu amasha afika ahlomele ukulawulwa kwe-digital, njengokuthinta isikrini, ukulandelwa kwekhadi le-SD, ukulawula izinga lokushisa kanye ne-LAN interface yokulawula isiphequluli. Akukho ukufakwa kwesofthiwe okudingekayo.
Ama-Slurries aphezulu kakhulu
Ama-homogenizers ethu asezingeni eliphezulu kanye nezimboni angakwazi ukucubungula ama-slurries ama-viscous of 250,000 centipoise. Ukuze i-viscosities ephakeme kunezingu-2,000 cPs sincoma ukusetshenziswa kwamaseli okugeleza okuqhubekela phambili amaphampu okuqhubekela phambili ekuxhumaneni okungcono.
Ama-mixers ase-Hielscher ultrasonic atholakala ngokufakwa kwe-sanitary ukuze kube lula ukufinyelela nokuhlanza. I-cavitation ye-ultrasonic isiza izinqubo zokuhlanza-in-place (CIP) – kuyisimo esinamandla kakhulu sokuhlanza i-ultrasonic endaweni.
Ngenkathi ama-tank agitators angahlanganisela kalula izidakamizwa ezingafani kahle ze-viscosity ezifanayo, uketshezi lwe-viscosity ehlukene noma uketshezi oluningi lwe-viscous lungadinga i-shear ephezulu yokwenza ukuxhuma okusheshayo nokuphelele. Amadivayisi wethu we-ultrasonic angakwazi ukuhlanganisa kalula iziphuzo ezimbili noma ngaphezulu ku-intanethi. Ngenxa yalokhu, iziphuzo zizohlanganiswa nje ngaphambi kokuba i-ultrasonic flow cell reactors. Funda kabanzi ngokuhlanganisa!
Ama-homogenizers ama-Hielscher ultrasonic aphumelela kakhulu ekufezeni i-globule encane neyomfaniswano noma usayizi wezinhlayiyana lapho kusetshenzwa ama-powder / liquid noma ama-liquid formulation. Amandla aphezulu okugcoba ukuhlunga amanzi aphethwe yi-ultrasonics aphula ama-agglomerate, amaconsi namashubhu eseli zibe yizicucu ezincane futhi akhiqize umkhiqizo omuhle wesayizi ofanayo. Uhlu lwethu lwe-homogenizers luhlanganisa noma yiliphi ivolumu yokucubungula kusuka kumabhodlela webhulethi kuze kube usayizi wokukhiqiza ngobuningi. Funda kabanzi mayelana ne-homogenizing!
I-Hielscher i-homogenizers ye-ultrasonic iphula ama-powder agglomerates kulesosizi ukuthi ama-agitators avamile nabaxube abaphezulu be-shear abakwazi ukuphula. I-shear high cavitational ihlakazeka futhi i-homogenizes izinhlayiya ezihlanganisiwe eziholele endaweni ephezulu. Ama-homogenizers ama-Hielscher ultrasonic angahlanganiswa kalula ku-line noma ku-batch. Funda kabanzi mayelana nokwehlisa amandla!
Cishe cishe wonke umkhiqizo, kubalulekile ukuthi izinhlayiya zihlukaniswe nezinye izinhlayiya ukuze zikhulise indawo yezinhlayiya futhi zifinyelele ukusabalalisa okufanayo. Ngisho nokusabalalisa kungatholakala kalula nge-ultrasonication. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher asetshenziselwa kakhulu ukukhiqizwa kokusabalalisa ama-fine in micron- ne-nano-range. Funda kabanzi mayelana nokuhlakazeka!
Uma kuhlanganiswa uketshezi okungenakuqhathaniswa emulsion, usayizi we-droplet nokusatshalaliswa kuyisici esiyinhloko sokuzinza kwe-emulsion. I-Ultrasonics ingadala amaconsi amancane kakhulu nobubanzi obuncane bokusabalalisa. Ezimweni eziningi, abaxube bethu be-ultrasonic bangakwazi ukufeza amaconsi e-submicron lapho belungiselela imulsions ku-batch noma ku-inthanethi. Ehlukile kuma-homogenizers ephakeme, ukukhishwa okuphezulu okukhiqizwa amadivayisi wethu we-ultrasonic kuzokhipha imithombo ye-viscosity ephezulu, njenge-oils okhululekile (ama-HFOs). Amanye amafomu angadinga ama-emulsifiers noma iziqiniseko ezingeziwe. Kulesi simo ama-ultrasonicators asiza ukuxuba i-emulsifier ngokufanayo. Funda kabanzi mayelana nokumisa okwesikhashana!
I-homogenizers ye-Ultrasonic yindlela ephumelelayo neyokwethenjelwa yokwenza izinto ezinhlobonhlobo, njengosawoti, ushukela, ama-syrups, ama-resins nama-polymers. Ijubane lejubane eliphakeme elidalwa yi-ultrasonic cavitation ukwandisa ukudluliswa kwamandla emigqeni yomngcele. Lokhu kubangela ukuqedwa okusheshayo nokuphelele okuphelele kokuqedwa kanye neaching lezinhlayiyana noma iziphuzo eziphezulu ze-viscosity. Funda kabanzi mayelana nokuqedwa kwe-ultrasonic!
Ultrasonic Particle Size Ukunciphisa
Amaprosesa ase-Hielscher ultrasonic angawaphula ama-agglomerate, ama-aggregates nezinhlayiya eziyinhloko zezinto ezihlukahlukene, njengezingulube, i-metal oxides, noma amakristalu. I-Ultrasonics ingafinyelela umfaniswano omkhulu kanye nobukhulu obuncane bokusabalalisa usayizi wezinhlayiyana ngaphandle kokuhluka okuncane phakathi kwama-batches. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuphumelela kakhulu ebangeni elingezansi kwe-micron engu-500 kuya kwe-micro-micron nobubanzi be-nano-usayizi. Izigameko zethu ze-ultrasonic zingasingatha ukuqina okuqinile kwezitshalo kanye nezindlalelo eziphezulu ze-slurry viscosities. Ubukhulu bezinhlayiya zokugcina buzoxhomeka ebubini bomkhiqizo. Funda kabanzi mayelana nokunciphisa usayizi wezinhlayiyana!
Izinqubo eziningi ze-Ultrasonic
Ubuso bezinhlayiya ze-powder kuyisici esibalulekile sokusebenzisana ne-liquid elizungezile. Kungenxa yemingcele enjalo / eqinile, lapho ukuqubuka, ukuphendula kwamakhemikhali noma umsebenzi we-catalytical kwenzeka. I-ultrasonic homogenization ikhulisa ukuvezwa kwe-particle surface kwisigaba se-liquide nge-uniform deagglomeration kanye nokunciphisa usayizi wezinhlayiyana. Phakathi nokusebenza kwe-catalytic kanye namakhemikhali, indawo yezinhlayiyana ingavinjelwa ukuthunjwa kwezinto zokuhlala, ukwakheka kwezingqimba zomngcele, izendlalelo ze-oksidi nokuxubha. I-cavitation ye-ultrasonic ibangela i-jets ephezulu yejubane, i-shear ephezulu ye-hydraulic kanye ne-inter-izinhlayiyana zokushayisana okubangelwa yizinhlayiya zokuhlanza. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic angasetshenziswa ku-batch noma ku-inthanethi ukususa ukungcola kusuka kuzinhlayiyana eziketshezi.
Ukuphazamiseka kwe-ultrasonic kanye nokuvusa amathangi kudinga imishini enokwethenjelwa, ikakhulukazi ukwanda kwama-viscosities kanye namavolumu. Ama-evitators tank ajwayelekile anjenge-paddle mixers noma ama-rotor-stator mixers anqunyelwe yizici ezahlukahlukene, kufaka phakathi i-viscosity kanye nokukhubazeka. Ngakho-ke, ukuphazamiseka kwamandla amakhulu we-ultrasonic kwamathangi kuyisinqumo esifanele senqubo yakho yokuxuba ngenxa yokufakwa okuphezulu, ukubeka isikhathi, izindleko eziphansi zokusebenza, ukusebenza okuphephile (azikho izingxenye ezinyakazayo) nokulungiswa okulula. Funda kabanzi mayelana ne-ultrasonic tank agitators!
Uma uxuba ama-powders owomile, njengama-pigments, ama-thickeners noma izinsini ezineziphuzo, izinhlayiya ze-powder zivame ukwenza ama-agglomerate, izimpumputhe noma okuthiwa “Izinhlanzi-Amehlo” (powder kancane e-hydrated nge-core powder core). Ama-agitators nama-stirrers azogeza izindawo ezinjalo, kuphela. Lokhu kubangela izikhathi zokuxuba eside kanye nemikhiqizo emibi yomkhiqizo. I-Ultrasonic mixing breaks agglomerates kanye nezikhala eziholele esixazululweni samahhala esingahlanganiswa. Ngaphezu kwalokho, imiphumela ye-sono-chemical iyaziwa ukuthi isebenzise indawo yezinhlayiya, okuholela ezintweni ezinjengezimpendulo ezisheshayo kanye nekhwalithi yomkhiqizo othuthukisiwe.
Ultrasonic Sample Ukulungiselela
Ukulinganisa ngamathuluzi wokuhlaziya (isb. HPLC, i-spectrometer ye-athomu, njll.), Ngokuvamile amasampula amaningi kufanele aphucwe. Uma isampula ihlaziywa, i-solute (njenge-sucralose, usawoti, isb in powder noma ifomu lethebhulethi) ingasungulwa ku-solvent (isb. Amanzi, ama-solvents aqueous, i-solvents ephilayo, njll) eholela enxenyeni ehambisanayo, eyakhiwe eyodwa kuphela isigaba. Inqubo yokuqothula ingenziwa nge-manual noma mechanical stimulation, okuyinto isikhathi esiningi futhi engasebenzi. Izinkinga ezihlobene ukulahlekelwa isampula ngenxa yokuxhashazwa noma ukulahlekelwa ukukhiqizwa kabusha ngamaphutha okungahleliwe nokuxuba okungalingani.
I-Ultrasonics ye-Activation ye-Chemical
Ukuqala ukuphendula kwamakhemikhali, amandla adingekayo. Lokhu okubizwa ngokuthi amandla okuvuselela yilapho inani elidingekayo ukuze liqalise ukusabela futhi liqhubeke ngokuzenzekelayo. Ngombono we-ultrasonic energy, amakhemikhali yokusabela angenziwa njengamabutho akhangayo anqotshwa futhi ama-radicals mahhala adalwe. Ukusabela kwamakhemikhali okuvamile okuzuza ku-ultrasound kuyi-sono-catalysis (isb isigaba sokudluliswa kwesigaba), ukusabela okwenziwe ngezakhi, i-sonolysis kanye i-sol-gel-izintambo. Ngaphezu kwalokho, amabutho e-ultrasonic enza izinto ezibonakalayo ezisebenzayo, okuyinto inqubo ebalulekile yokwandisa umsebenzi we-catalyst.
Isimo se-viscosity esinciphisa ngaphansi kwempi ye-shear ekhulayo ibizwa ngokuthi i-shear thinning noma i-thixotropic. Ukunciphisa i-viscosity kubaluleke kakhulu uma umthwalo wezinhlayiya we medium kufanele ushintshwe. Ukufeza umthwalo oqinile oqinile, esiteji sokuqala i-viscosity kumele ihliswe. Ngemuva kokunciphisa i-viscosity, izinhlayiya zinganezelwa futhi zihlakazeke phakathi. Amandla amakhulu aphezulu aphethwe yi-ultrasonic cavitation abangela imiphumela ye-shear-thinning kanye nemiphumela evelele ehlakazekayo. Lolu hlelo lokusebenza luhlanganiswe ikakhulukazi ngaphambi kokusula noma ukufiphaza ukwandisa amandla okwenza inqubo yokupuniza noma ukuthinteka ukulandelana kwempahla ye-thixotropic, isib. Ama-polymers.
I-Ultrasonic Wet Milling
Ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana nezinhlayiyana yizinqubo eziyinhloko emagatsheni amaningi asezimboni ezifana nopende & ukugqoka, inkjet ink & ukunyathelisa, amakhemikhali noma izimonyo. Ubuchwepheshe be-milling ultrasonic buboniswe ukunciphisa usayizi othembekile nokusabalalisa emkhakheni we-micron- nano-size. Amandla ayo angenakuqhathaniswa phezu kwezinyosi, ibhola, kanye namatshe okugcoba amatshe asekugwemeni kwanoma yimiphi imidiya yokugaya (isib. Ubuhlalu / amaparele) engcolisa umkhiqizo wokugcina ngenxa yokukhishwa. Ngokuphambene nalokho, ukukhishwa kwe-ultrasonic kusekelwe ekuhlanganyeleni okungezansi-lokhu kusho ukuthi izinhlayiya ezimele zisetshenziswe njenge-grist. Ngakho-ke ukuhlanza okwesikhashana kokusakaza imishini akuyona inkinga enkulu. Ama-viscosity aphakeme kanye nemifudlana emikhulu yevolumu angasetshenziselwa ukuphumela kumkhiqizo omkhulu wekhwalithi. Ukuze kuhlanganiswe ngendlela yemboni yokusebenza, i-Hielscher inikeza isisombululo esifanele: izinhlelo ezihlanganisiwe, ukuhlanganiswa okulula / ukuvuselela, ukugcinwa okuphansi, ukusebenza okulula nokuthembeka okukhulu. Funda kabanzi mayelana nokugaya okumanzi nokugaya okuhle!
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic ne-Cell Lysis
Ukuhlukaniswa kwamagciwane noma i-lysis kuyinxenye evamile yokulungiselela isampula nsuku zonke kuma laboratories e-biotech. Umgomo we lysis ukuphazamisa izingxenye zodonga lwamaseli noma iseli eliphelele ukukhulula ama-molecule ephilayo. Okubizwa okuthiwa i-lysate kungahlanganisa isib. I-plasmid, i-receptor assays, amaprotheni, i-DNA, i-RNA njll. Izinyathelo ezilandelayo ngemuva kwe-lysis yi-fractionation, isolation organelle noma / kanye ne-protein extraction kanye nokuhlanzwa. Izinto ezikhishwe (= lysate) kufanele zihlukaniswe futhi zihloselwe ukuphenywa okuqhubekayo noma izinhlelo zokusebenza, isb. Ucwaningo lweproteomic. I-homogenizers ye-Ultrasonic iyithuluzi elivamile le-cell lysis eliphumelelayo nesitokisi. Njengoba amandla e-ultrasonic angafakwa ngokulungiswa kwemigomo yemigomo, ukuqina kwe-sonication okuhle kakhulu – ihlukahluka kusukela ethambile kakhulu kuya enamandla kakhulu – ingahle isethelwe ngayinye imithi kanye naphakathi. Funda kabanzi mayelana nokukhipha kanye ne-cell lysis!
I-Ultrasonic Microbial Inactivation
Inactivation microbial kuyindlela eyinhloko ekusetshenzisweni kokudla. Ngenxa yesidingo esandayo sokudla okusheshayo, okunomsoco, imboni ilandela ukufunwa kwamakhasimende ngokufaka esikhundleni sokulondolozwa okushisa ngezindlela ezibukhali zokucubungula. I-Ultrasonication yindlela yokungasebenzi engavumelekile evumela ukungasebenzi kwe-microorganisms kumazinga okushisa angama-sublethal okwenza kube nokulondolozwa kangcono kwezimfanelo ezizwakalayo, izakhi zokudla okunomsoco nezisebenzayo zomkhiqizo. Njengama-microorganisms iyimbangela eyinhloko yokudliwa kokudla, inqubo yokulondoloza kumele ihloselwe kubo. Inzuzo ye-sonication yiyona egcwele ukulawula ukuqina kwe-sonication ngakho-ke ukuvumelanisa nezinhlobo ezithile ze-microbes nomkhiqizo. Funda kabanzi mayelana nokungasebenzi kwe-microbial!
Emikhiqizweni eminingi yamanzi, igesi eliqhekekile njengomoya, i-oksijeni noma i-carbon dioxide, lidala izinkinga ezinkambisweni ezisehla phansi noma izinga lomkhiqizo. Igazi elichithwe lingabangela ukubola, ukuqhuma, ukubunjwa kwamabhulebhu amancane noma ukukhula kwamagciwane.
Ngaphansi kwe-ultrasonic irradiation, igesi eliqothulwayo likhishwa ngaphakathi kwe-vacuum ye-cavitation bubbles (i-vacuum degasification). I-bubbles egcwala igesi ibuye ifinyelele phezulu bese ingasuswa kanjalo. Okuqukethwe kwegesi ketshezi kungancipha ngokushesha ngaphansi kwesilinganiso semvelo endaweni yengcindezi yomoya ngokusebenzisa i-ultrasonic degassing. Funda kabanzi mayelana ne-degassing!
Ukususwa kwe-Ultrasonic ye-Micro-Bubbles
Ukumiswa kwamabhulebhu amancane ngamanzi neziphuzo kuyinkinga ephawulekayo yekhwalithi yemikhiqizo eminingi, njengoba amabhuleki angabangela ukungahlanzeki komkhiqizo, ukukhula kwemikhiqizo yezinhlamvu ezincane, ukungafihli ukugqoka, ukungaqiniseki kwemishini, noma ukunyathelisa okungalingani kwe-inkjet ink ink. Amagagasi e-ultrasonic asakazeza ngamandla e-liquide amisiwe amabhubhu ukuze ahlangane zibe amabhulogi amakhulu ayoshelela phezulu futhi angasuswa kanjalo. I-ultrasonication iyasiza amabhulebhu ukuba ahambe kulokhu oketshezi, isib. Amanzi, amafutha noma i-resin, eholele ekuqedeni okusheshayo nangaphezulu okuphelele. Funda kabanzi mayelana nokususwa kwamabhulebhu amancane!
Ezinkambisweni eziningi zezimboni, ezifana nokuvutshelwa, ukugaya noma izinqubo zamakhemikhali, i-foam idala izinkinga ezinkulu njengoba yenza inqubo encane ibe yilawuleka. Ngokuyinhloko, i-foam ingumkhiqizo ongafuneki, okumele ususwe. Amakhemikhali aphikisayo asetshenziswe ngokuvamile ayabiza futhi angcolisa umkhiqizo wokugcina. Ngokuphambene nalokho, amagagasi amakhulu kakhulu e-ultrasound (i-sono-defoaming) aphula isikhumba ngaphandle kokungcola. Ukubhujiswa kwe-foam kuyisicelo esincane, esincane se-ultrasonic. Ama-sonotrode asetshenzisiwe ngokukhethekile adala amagagasi aphezulu angama-amplitude emoyeni, okuyinto ehlukumeza ama-bubbles ku-foam ngakho awela. Lokhu kungafinyelelwa emasekhondini ambalwa futhi ayinayo imiphumela ehleliwe. Funda kabanzi mayelana nokwehlisa amandla!
Nakuba ukushisa ngokuvamile akuyona injongo eyinhloko yokunakekelwa kwe-sonication, umphumela ohlangothini wokushisa ukushisa esikhungweni esiphathwe kahle akufanele unganakwa. Ukushisa okulawulwayo kunenzuzo njengoba izinqubo eziningi zithuthukiswa ukushisa. Phakathi nezinqubo eziningi, isib. Ukulondolozwa noma ukusabela kwamakhemikhali, ukwelashwa kwe-ultrasonic kuncike ngenhloso yokushisa okuphakeme, okubizwa ngokuthi i-thermo-sonication. Izinto zokwehlisa ukushisa, ukupholisa okuhlosiwe ngenkathi i-sonication igcina ukushisa okumile okusimeme ngesikhathi sokucubungula kwe-ultrasonic. Ngokusebenzisa amabhati okugeza, ukugeleza kwamaseyi ngamabhakethi okupholisa nokuhlanganiswa kokushisa okuhlangene ekusethelweni, i-Hielscher inikeza isisombululo sezinhloso zakho ngabanye.
Amandla amakhulu e-ultrasound anegalelo ekuqiniseni imishini kanye ne-microbial. Ama-ultrasounded generated shear forces ahlinzeka ngokuxuba okuhle kakhulu ukuze ukuhlanganiswa okuphakathi kwezinhlayiyana kunqotshwe futhi ukuqiniswa komshini kufinyelelwe. Ukuqina kokuzinza kuxhomeke ekubunjweni: ezinye emulsions kanye ne-dispersions zizinzile ngenxa yehle kakhulu futhi ngisho ne-homogenization, kanti ezinye izingxube kufanele zisekelwe ngokungezwa kwama-agent azinzile. Uma kudingeke ukuqiniswa, i-ultrasound iyithuluzi elithembekile kakhulu lokuxuba ukuzinza engxenyeni.
Ukuze uthole imikhiqizo ehlobene nezidakamizwa nezokudla, i-ultrasound iyinqubo ethembekile yokusebenza okungenayo microbial ukufeza umkhiqizo ukuzinza nokulondolozwa. Ukusimama kwe-microsonal microbial kungenye indlela yokulondoloza okungezona okufudumele okuqinisekisa ukuthi ukuvinjelwa kwemikhiqizo ye-microbial ephumelelayo kanye nesizukulwane sokushisa kuphela. I-Ultrasound iboniswe ukuthi iphumelela kakhulu ekubhujisweni kwezifo eziphethwe ukudla, njenge-E.coli, i-Salmonellae, i-Ascaris, i-Giargia, i-Cryptosporidium cysts ne-Poliovirus.
I-Ultrasonic Particle Ukusebenza Okusebenzayo
Ukwakhiwa kobuso bezinhlayiyana kubalulekile kulezi zici zezinhlayiyana. Indawo ethize yezinhlayiyana ikhula ngokubambisana nokunciphisa usayizi wezinhlayiya. Ngakho, ngokunciphisa usayizi wezinhlayiyana, izindawo ezibonakalayo ziba zivelele - ikakhulukazi ngesikhathi se-nanonization. Ukuze kusetshenziswe izinto ezinjalo, izici zomhlaba zibalulekile njengezindawo ezisemqoka. Lokhu kusho ukuthi ukusebenza kwama-nanomaterials kwenza inqwaba yezinhlelo zokusebenza ezifana ne-polymers, i-nanofluids, i-biocomposites, i-nanomedicines, ne-electronics. Lokhu kwenza ukunciphisa usayizi, ukuguqulwa kwamanzi, nokusebenza kahle isinyathelo esibalulekile ekwelapheni kwezinhlayiyana. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher asetshenziselwa kakhulu ukwelashwa kwe-micron- ne-nano-izinhlayiya ukuze kuguqulwe, ukuguqula, ukuhlakaza nokuguqula isakhiwo sabo. Ngokuguqulwa kwe-particle surface, i-aggregation engadingeki yezinhlayiya zingagwenywa. Ezinyathelweni eziphansi, izinhlayiya ze-ultrasonically modified zingaxubaniswa ezingxenyeni, lapho i-sonication ifinyelela khona ukusatshalaliswa okufanayo ngaphakathi kwe-matrix. Lokhu kubaluleke kakhulu kwizicelo eziningi ezimbonini eziphathelene nokuzinza isikhathi eside noma izakhiwo zomshini wezinto eziyimfucuza.
Ukuhlolwa kwe-Ultrasonic Erosion
Ukumelana nokukhuphuka kwe-cavitation kuyisici esibalulekile sokuqina kwezinto ezibonakalayo nokuphila kwesikhathi. Ukuqinisekisa ukusebenza komzimba, ukuguguleka kokukhukhula nokukhathala okubonakalayo kumele kuhlolwe ukuqinisekiswa kwekhwalithi. Ukumelana nokushisa kwe-Erosion kubaluleke kakhulu ezintweni ezisetshenziselwa izindawo ezifuna izinto ezinjengezimpahla zokuhambisa umkhumbi, izikebhe zamanzi, amaphampu, izingxenye ze injini, ama-hydraulic turbines, ama-hydraulic dynamometers, ama-valve, ama-bearings, i-diesel engine cylinder liners, ama-hydrofoil, nama-pass flows ukuvinjelwa nokunye. Ukwenza ukuhlolwa kokuguguleka komzimba ngokuhambisana ne-ASTM Standard G32-92, ukulawulwa kwe-ultrasonication okulawulwayo futhi okukhiqizayo kungenakugwemeka. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic angasetshenziselwa ukuhlolwa kokuguguleka okuqondile nokungaqondile kwamasampuli. Imishini efanayo ye-ultrasonic ingasetshenziselwa kokubili, ukuhlolwa okuqondile nokungaqondile. Ngesikhathi sokuhlolwa okuqondile isampula ihanjiswe ku-sonotrode, kanti ngokuhlolwa okungaqondile kokuguguleka kwesimo esicacisiwe ku-beaker. Ukuhlolwa kokukhukhula kungenziwa ngaphansi kwezimo ezilawulwa ngokugcwele kwezemvelo futhi cishe zonke izikhukhula. Ngokulungisa ukuqina kwe-ultrasonic, amandla avuselelayo angashintshwa nezidingo zokuhlolwa. Funda kabanzi mayelana nokuhlolwa kokukhuphuka!
I-ultrasonic Wire kanye neCheeling Cleaning
Izinto ezingapheli ezifana nezintambo, izintambo, amateyipu, izintambo, namathebhu kufanele zihlanjululwe izinsalela zokugcoba ngaphambi kokuba ziqhutshwe ngaphansi, njenge-galvanizing, extrusion noma welding. Ukuhlanzwa kwezinto ezingenamkhawulo ngokuvamile kuvame ukungena emgqeni wokukhiqiza. I-Hielscher Ultrasonics inikeza inqubo ehlanzekile yokuhlanza i-ultrasonic ye-inline ehlanzekile yokuhlanza, engakwazi ukusingatha ngisho nejubane le-throughput eliphezulu. Umphumela we-cavitation owenziwe amandla e-ultrasonic ususa izinsalela ze-lubrication njengamafutha noma amafutha, amasobho, ama-stearates noma uthuli. Ngaphezu kwalokho, izinhlayiya zokungcola zihlakazeka emanzini okuhlanza. Ngalokho, ukunamathela okusha kwento okumele ihlanjululwe kugwenywe futhi izinhlayiya zixotshiwe. Izinzuzo zokuhlanza kwe-ultrasonic shazi: kuqinisekisiwe & ezinokwethenjelwa, ezisebenzayo, ezokungcolisa imvelo, ezincane noma ezingekho namakhemikhali wokuhlanza amakhemikhali, ama-plug-and-play, amasistimu amancane, ukusebenza okulula, ukugcinwa okuphansi, ukusebenza kwe-24/7, ukulinganisa okuncane, okubuyiswa kabusha, okwenziwa ngokwezifiso. Funda kabanzi mayelana nokuhlanza okuqhubekayo kwe-strand!
I-Ultrasonic Sieving ne-Filtration
Ukuhlukaniswa kwezinhlayiyana ngokusatshalaliswa kwesayizi kudinga ukuqhuma kwesikrini noma ukubopha. Ukuqhuma kwe-ultrasonic ye-sieving nokuhlola kuyi-thuluzi eliqinisekisiwe, okwandisa isisindo somswakama futhi kusindisa isikhathi njengama-powders anikwe amandla okudlula isihlunu ngokushesha futhi ephelele. Umphumela uwukugcina izinga lomkhiqizo wokugcina onokulahleka okuncane okungokwenyama ngenxa yokuhlukaniswa okungaphelele - futhi konke kungakapheli isikhathi sokucubungula. Funda kabanzi nge-sieving nokuhlola!
I-Ultrasonic Water Treatment
Ukulawulwa kwamabhaktheriya nokukhula kwamanqamu emanzini yizimboni eziningi ezihambisana nenqubo ephezulu kakhulu noma ephansi. Amagagasi ama-ultrasound anamandla ayaziwa ngemiphumela yawo emagcekeni eseli okwenza i-cell lysis kanye nokufa kwamaseli kanye nokuhlanza kwabo ngenxa yethonya lomshini.
Ngaphezu kwalokho, amathangi, imiphongolo, imikhumbi ngisho nezihlungi zingaphumelela ukuhlanzwa ezivela kwi-biofilms, izinsalela, kanye nezinhlayiya ngesinyathelo esilula kodwa esisebenza kahle sonication. Ukudlidliza okwenziwa yi-Ultrasonically mechanical and cavitational shear force kususa ukungcola. Ngokuvamile, ama-agent wokuhlanza awadingekile futhi izinsalela ezisuswe zingasuswa kalula.
Izinto zokwakha iNano ziheha othisha, abacwaningi nabanjiniyela cishe cishe noma yikuphi amagatsha njengezinhlayiya ezincane ezibonisa izici eziyingqayizivele. Izakhiwo zabo ezibonakalayo ezifana nezakhiwo ezikhanyayo nezibuthe, ukushisa okuqondile, amaphuzu okuqhaqhazelayo, kanye nokubuyiselwa kwezinto ezisezingeni eliphezulu kunikeza amandla amakhulu okuba nezinto ezinamandla amakhulu. Kodwa ezincane izinhlayiya, kunzima kakhulu ukwelashwa kwabo. Amandla amakhulu e-ultrasonics ngokuvamile yindlela kuphela yokwenza izinhlayiya ze-nano ngempumelelo. Ithonya lamandla ultrasound livumela izinhlelo zokusebenza ezihlukahlukene ezintweni zokwenza imithi & ukuthuthukiswa, catalysis, electronics, energy, kanye biology & imithi.
Ngokuyinhloko, ama-high power ultrasonicators yiyona kuphela ithuluzi eliphumelelayo lokufeza ukukhishwa okufunayo nokusabalalisa imiphumela yezinhlayiya ze-nano (isb. Ama-nanotubes, I-Graphene, i-nanodiamonds, i-ceramics, i-metal oxides njll). Ngaphandle kwalokho, ukuchithwa kwe-ultrasonically okusizayo noma okuthiwa yi-bottom-up synthesis yindlela ephumelelayo yokwakha ama-nano amakristalu ahlanzekile ngezinto eziyingqayizivele. Ikakhulukazi, izinhlayiya ze-nano zensimbi, ama-alloys nama-organometallic izakhi ziheha isithakazelo esithile, njengoba izinsimbi zibaluleke kakhulu emkhakheni wezimboni. Nalapha, i-sonication inikeza imiphumela eyingqayizivele njenge-tin-coating of aluminium kanye ne-titanium particles.
I-Ultrasonic Bottom-Up Synthesis
I-precipitation noma i-bottom-up synthesis ichaza ukubunjwa okulawulwa kwama-athomu, ama-molecule kanye ne-ions zibe ngamakhemikhali amakhulu amakhemikhali. Ukukhuphuka nakho kuyasiza ekuhlanjululweni kwemikhiqizo. Inzuzo yemvula yileyondlela yilezi zindlela ezincane kakhulu ezinamafomu okufana nomfutho, i-particle / crystal size kanye ne-morphology. Ukuze kusetshenziswe izinhlayiyana ze-nano zokuhlanzeka okukhulu, imvula kanye nokuzihlanganisa kwezingxenye zamangqamuzana ngokuvamile kuyindlela kuphela yokufeza izinga elifunayo. Njengoba imvula isabela ngendlela esheshayo, ukuxuba ngokuphumelelayo kwama-reactants kubalulekile. Ukuxuba i-Ultrasonic kuyisihluthulelo sekhambi elihle ngisho elihle elixubekile. I-Hielscher Ultrasonics inikeza imishini enokwethenjelwa kakhulu ye-ultrasonic eqinisekisa ukulawula okuphelele phezu kwemingcele yenqubo kanye nokukhiqiza okuphelele. Funda kabanzi mayelana nemvula!
I-Ultrasonics eKhemistry neSono-Chemistry
Izicelo ze-Ultrasonic ekwakhiweni kwamakhemikhali kuzo zonke izigaba kufaka phakathi ukwaziswa kwezinto, ama-analytics & ukuzimisela, i-biochemistry, i-organic & i-chemistry engavamile, i-neurochemistry, i-chemical chemistry kanye ne-electrochemistry. Kungakhathaliseki ukuthi amandla aphakeme e-ultrasound akhuthaza ukusabela ngamakhono awo okuxuba okuvelele (isb. Emulsion chemistry, isigaba sokudlulisa isigaba se-PTC), ivuselela izakhiwo (isb catalysis, i-sol-gel), iqala ngokunikela nge-kinetic energy edingekayo noma ukunqotshwa kwamandla amakhemikhali (isib. i-Zeta, amandla e-Van-der-Waals, ukusabela kokuvula), imiphumela engavamile ingafinyelelwa.
Ama-catalysts akhulisa izinga lokuguqulwa kokuphendula kwamakhemikhali futhi adingekayo ukuqala ukusabela noma ukugcina ukusabela kusebenza kuze kufike ukuguqulwa okuphelele. Iqiniso lokuthi ukusabela okuvame ukuhamba kancane kaningi futhi kungaphelele kungashintshwa yi-high power ultrasound. Ultrasonication inomthelela kokubili, catalytic homogeneous futhi heterogeneous futhi ifinyelela ngokushesha ukuguqulwa rates kanye isivuno ephakeme. Amandla e-ultrasonic enza ama-surfaces asebenzayo kakhulu futhi ngaleyo ndlela akhulise umsebenzi owenziwe ngokuzithandela. Ngisho noma ama-catalysts awaqothulwanga ngokwawo, ukufakwa kwezinto ezingaphezulu kunganciphisa umsebenzi we-catalyst phezu kwesikhathi. Njengama-catalyst eqinile ngokuvamile adinga izinsimbi ezingavamile nezindleko, isikhathi eside sokuphila yisici esibalulekile sezomnotho. I-Ultrasound iyindlela yokufakazela ukuthi kususwe ukuxoshwa kusuka endaweni yokucubungula ukuze kuvuselelwe amandla okugcwele. Funda kabanzi mayelana nesono-catalysis!
Ukuphendula kwama-chemical ngokuvamile kuhamba kancane futhi akuphelele, ngakho ukufeza ukusetshenziswa okugcwele kwama-precursors kuyadingeka. Ama-high-power ultrasonics abangela imiphumela emzimbeni ekunaketheni, ngokwesibonelo, ukudluliselwa kwamandla okuthuthukisiwe, ukufudumala okukhulu kwe-emulsification, nokushisa okukhulu okushisa, kanye nemiphumela ehlukahlukene emanzini amaningi (ukugaya, ukuguqulwa kwamanzi, ukusebenza kwendawo, ukuguqulwa). Lezi zimo zomzimba zithonya kakhulu ukuphendula kwamakhemikhali. Ngenxa yalokho, i-ultrasound inikela ekuphenduleni kwamakhemikhali amaningi njenge-catalysis, synthesis & imvula, imizila ye-sol-gel, imithi yomshukela kanye ne-polymer chemistry. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic afanelekile ekusetshenzisweni kwe-sonochemical njengoba izinhlelo ze-Hielscher zikwazi ukusingatha izixazululo, ama-acids, izisekelo nezinsimbi zokuqhuma (I-ATEX ilinganiswe i-ultrasonicator UIP1000hd-Exd). Zonke izinhlelo zingasetshenziselwa ukunikezwa kwe-batch kanye ne-sonication encane. Ukuhlanganiswa okubanzi kwamadivaysi nezesekeli kuvumela ukufanisa izidingo zenqubo. Funda kabanzi mayelana ne-sono-chemistry!
Izinhlayiya ze-ultrafine nezinhlayiya ezibunjiwe, amafayili amancane amafilimu, amafayili, izinto ezivuthayo nezimbizi, kanye nama-aerogels anamahloni kakhulu kanye nama-xerogels yizithasiselo ezikhona kakhulu zokuthuthukiswa nokukhiqizwa kokusebenza okuphezulu. Izinto ezithuthukisiwe, kufaka phakathi isib. I-ceramics, i-porerics enamandla kakhulu, ama-aerogel alula okukhanya okukhanya kanye nama-organic-inorganic hybridi angakhiwa kusukela ukumiswa kwamakholomu noma ama-polymers ku-liquid ngokusebenzisa indlela ye-sol-gel. Lezi zinto zibonisa izici eziyingqayizivele, ngoba ama-particle sol ayenziwe avela usayizi we-nanometer. Nge-ultrasonic sol-gel umzila, ama-gel (okuthiwa ama-sono-gels) anesayizi encane kakhulu yezinhlayiya, indawo ephezulu kakhulu kanye ne-pore-volumes ephakeme kakhulu ingadalwa. Ububanzi obubanzi bemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher inikeza ukulungiselelwa kwedivayisi ekahle ngezinsiza ezithile kanye nemithamo ethile. Funda kabanzi mayelana nezinqubo ze-sol-gel!
I-Ultrasonic Chemical Degradation
Imfucuza yamakhemikhali eveza ukutholakala kwayo kanye nokulimala kuyinkinga enkulu yezinqubo zezimboni ezifana nokumbiwa kwezimayini, ukukhiqiza amakhemikhali kanye nezindawo zokuthungelwa komhlaba. Ukungcola kanye nokungcola (isb. Inhlabathi, amanzi amfucuza ...) kumele kusetshenzwe ngendlela yokuvuselela kabusha, ukuncishiswa kwemfucuza noma ukufaka imali. Ukuchithwa kwe-sonochemical kuyindlela enhle kakhulu, engabonakali ngaphandle kwemiphumela yayo evelele neyingqayizivele yokuhambisana nomvelo nokusebenza okulula. I-Sonication ingabangela ukuhlanzeka kwezibopho, ukunciphisa ubude bezinsimbi, ukuguqulwa kwamangqamuzana noma ukusebenza. Ngokwenza kanjalo, igalelo ekwenzeni i-oxidation, sorption, sonolysis kanye neaching. Izici zobuningi bokudonswa kwe-ultrasonically-assisted ukukhula kwezinga lokuguqulwa kwamakhemikhali kanye ne-ultrasonic cavitation kanye nemiphumela ye-sonochemical inikeza ukuxuba okungcono, ukuqaliswa kokuphendula nge-energy input, ukudalwa kweqembu elisebenzayo (isib. Cleavage -OH hydroxyl amaqembu) kanye nama-radicals (isib. H2O -> H + no-HO-).
I-Sonication inezimo ezihlukahlukene kuma-polymers: imiphumela yemvelo ihlanganisa ukuxuba (njenge-emulsification, ukusabalalisa, ukuguqulwa kwamanzi, ukufakwa kwe-encapsulation) nokushisa okuningi, kanti imiphumela yamakhemikhali yenza ama-radicals mahhala futhi ashintshe izakhiwo zamangqamuzana. I-Ultrasound inikeza ngezindlela eziningana ukuze i-polymerization: Amagagasi amakhulu aphezulu ama-ultrasound akhiqiza futhi ahlakaze izinhlayiya ze-nano-size, emulsify izigaba zamakhemikhali ezingenayo i-miscible futhi adale ama-radicals mahhala okufaka isandla emulsion polymerization. Ama-nanocomposites e-polymer nama-hydrogel angakhiwa ngempumelelo nge-ultrasound. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza komzimba kwama polymers kudlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni ukusebenza kwama polymers ayisisekelo futhi unikeza izindlela ezintsha ekuthuthukiseni izinto ezihambelanayo. Ukuthuthukiswa kwezakhiwo eziphezulu ze-polymers yezimpahla kunesithakazelo esikhulu sezomnotho. Ngakho-ke, i-sonochemistry yindlela efanele yokuphathwa kokwelashwa kwe-polymer.
I-ultrasonic Catalyst Reclamation nokuvuselelwa kabusha
Lapho ama-reagents esabela endaweni yokucubungula kwe-particle, imikhiqizo ye-chemical reaction reacts at the surface contact. Lokhu kanye nezendlalelo zokuqhaqhazela nokuvimbela izivimbela amanye ama-molecule e-reagent ekusebenzisaneni nalokhu kuphezu komhlaba. By cavitation ultrasonic futhi ngaleyo ndlela kubangelwa inter-izinhlayiya ukushayisana, izinsalela on the particle surface ziphukile-off futhi wageza nge ukusakaza ultrasonic in the liquid. Ukuguguleka kwamakhemikhali ezinhlakeni zezinhlayiya kudala izindawo ezingenasisekelo, eziphezulu kakhulu. Ukushisa okuphephile okufishane nokucindezela kunomthelela ekuqhekekeni kwamangqamuzana futhi kwandise ukusetshenziselwa kwezinhlobo zamakhemikhali amaningi. Ama-reactors we-Hielscher ultrasonic angasetshenziswa ekulungiseleleni, ukubuyisela kabusha nokuvuselelwa kwe-catalysts.
I-Sonoluminiscence ichaza isimo se-bursts emifushane yokukhishwa okukhanya okukhiqizwa yi-imploding ultrasonic cavitation bubbles endaweni ekhethiwe. Yize kunezinkolelo ezahlukene ezizama ukuveza lo mkhuba we-sonoluminiscence, kuze kube namuhla ososayensi babengenakufakazela imibono yabo, efaka phakathi i-hotspot, imisebe ye-bremsstrahlung, ukukhanya kwe-collision, ukukhanya kwe-proton, ukudonsa kwe-proton, i-jet electrodynamic kanye nama-jet fractoluminescent, incazelo ye-quantum (ehlobene nomphumela we-Unruh noma we-Casimir) noma ukusabela kwe-thermonuclear fusion.
Ultrasonics ku-Biology and Microbiology
Imiphumela ye-ultrasonic ezinkambisweni zezinto eziphilayo kanye ne-microbiological zikhona: Ukuhlakaza & I-homogenization, ukuchithwa kwama-aggregates, i-cell kanye nezicubu lysis (isib. Amabhaktheriya, imvubelo, amagciwane, ama-algae ...) & ukukhishwa kwezinto zokwenziwa kwe-intracellular (isib. amaprotheni, i-organelles, i-ribosomes, i-DNA, i-RNA, i-lipids, i-peptides ...), isitshalo sesiguquko sentshalo, i-chromatin ukuhlukaniswa nokugqoka, i-chromatin immunoprecipitation kanye nezicelo ezihlobene zenziwa ngempumelelo nge-sonication.
I-Hielscher Ultrasonics ine-ultrasonicator efanelekayo yesicelo ngasinye ngabanye. Ezingxenyeni ezincane kunawo wonke kanye nezibhamu zokuhlola, i I-VialTweeter iyona idivayisi oyithandayo, ngenkathi ibrabhu ihlola imboni efana ne UP200Ht noma UP400S okuphatha kahle amasampula amakhulu. Ukuze kubhekwe phezulu kanye nezicelo zezohwebo, izinhlelo ze-ultrasound ezivela Ama-Watts angu-500 kuya ku Ama-watts angu-16,000 asingatha imifudlana emikhulu yevolumu kalula. I-sonotrodes ehlukahlukene, amaseli okugeleza nezesekeli ziqedela uhlelo futhi zimboze zonke izidingo.
I-Ultrasonic DNA, i-RNA ne-Chromatin Shearing
I-Deoyxribonucleic acid (i-DNA), i-ribonucleic acid (i-RNA) ne-chromatin - kanye namaprotheni - ama-macromolecules amakhulu kuwo wonke izinhlobo zokuphila. I-DNA ne-RNA yizinhlayiya ezifake iziqondiso zofuzo eziphilayo. I-Chromatin iyinhlanganisela ye-DNA namaprotheni lapho kuvela khona okuqukethwe kwe-cell nucleus. Ngenhloso yokucwaninga, kubalulekile ukuhlukanisa lezi zakhiwo zamakhemikhali zibe izingxenye ezincane zokuphenya nokuzihlaziya noma ukuzihlela kabusha ngesikhathi sokugonywa kwegazi kanye nokunciphisa. I-DNA, i-RNA ne-sherom chromatin, isayizi ye-fragment ibaluleke kakhulu. Ngokulawula ngokugcwele phezu kwemingcele ebalulekile, i-ultrasound yenza kube lula ukuhlukaniswa kwe-molecule okuhlosiwe. Ngokwesibonelo, ubude be-chromatin fragment ubude buphakathi kuka-200 no-1000 bp. Ukukhipha i-Ultrasonic kutholakala ngokuqhuma kwimodi ye-pulse. Ngenxa yamadivaysi ahlakaniphile nezesekeli, ukucubungula izidingo ezinjengobunikazi obuqondile noma obungacacile, isampula yokupholisa, inqubo yokuqopha yedijithali inikezwa yimishini ye-ultrasonic yaseHielscher. Lokhu kuqinisekisa ukuphumelela kwe-microbiological processing kanye nokusebenza induduzo.
Ultrasonics for Paint, Ink kanye namaPigments
Esikhathini sokudweba, izigqoko zokugqoka kanye neyinki, izinhlayiya yizinto ezidingekayo zokusungulwa komkhiqizo. Imikhiqizo yekhwalithi ephakeme enikeza izici ezilindelekile, nokucubungula izinhlayiya ezinokwethenjelwa kubalulekile. Usayizi wezinhlayiya yiyona nto ebalulekile ethonya izakhiwo zomkhiqizo wokugcina. Amandla amakhulu e-ultrasound yizona zindlela eziphumelelayo zokugaya nokwahlukana kwe-micron-nano-size - ngaphandle kokuhlukunyezwa okwenzeka ngokusebenzisa imidiya yokugaya noma amabhubhu.
Ngama-inks nama-ink jet inks, usayizi wezinhlayiya yilophawu lokukhishwa kwekhwalithi: ingabe i-pigments encane kakhulu, i-inkino ilahlekelwa amandla ayo okuthambisa – i-pigments ikhulu kakhulu, i-clock bicu clog eholela ekushicilelweni okuncane. I-Ultrasonication ivumela ukulungiswa kwemigomo yokucubungula ngokuqondile kwimiphumela yokugaya nokufunwa kwe-deagglomeration. Lapho ama-parameters okucubungula ama-ultrasonic atholakele, asikho isizathu sokuwushintsha. Ukukhiqizwa kwe-inline okuqhubekayo kwenza kube nokukhishwa kwekhwalithi enkulu yomkhiqizo. Ukusatshalaliswa kwezinhlayiyana ngaphakathi kokubaluleka kubalulekile ekuboniseni izimfanelo zemikhiqizo. Uma kuphela izinhlayiya zihlakazeka ngokulinganayo futhi zifanelwe, umkhiqizo wokugcina ubonisa ikhwalithi egculisayo njengokubonakala, ukuphikiswa kwe-UV, noma ukumelana nokuqina kwezingubo. Ukuhlakazeka kungenye yezinhlelo zokusebenza ezigunyaziwe ze-ultrasound.
Okwe ukukhiqizwa kwezimonyo, ukuxuba izithako kuyisinyathelo esibalulekile. Amandla amakhulu e-ultrasonics azuze imiphumela ethembekile ku-size-size homogenizing, ukusabalalisa nokumisa emulsification - isb for creams kanye lotions, nail varnish, kanye nemikhiqizo ukwakheka. Ngaphandle kwezicelo ezihlanganiswayo, i-ultrasound iyaziwa ngokukhipha kanye nokuguqulwa kweseli (isb Liposomes), futhi. Izithako eziningi, ezingena ekubunjweni, zitholakala ngokukhipha, isibonelo, i-lipids, amaprotheni, ama-compounds aphuzi noma amabalabala avela kumaseli, i-ultrasound iyithuluzi eliphakeme elinamandla lokubunjwa okusha.
Izicelo ze-ultrasound embonini yezokwelapha ziyizinto eziningi: ukuhlanganiswa kwamakhemikhali amakhemikhali, ukwenziwa kwamakhemikhali asebenzayo (isib. Phenols, flavonoids ezivela ezitshalweni), emulsification (ye-lotions, ama-creams namafutha okugcoba), ukulungiselela i-liposome (encapsulation), noma inactivation of amagciwane kanye nezifo imithi. Ekukhiqizeni imithi, ukusebenzisa ama-ultrasonicators ama-Hielscher kuvumela ukwanda kwamakhono okukhiqiza ngokukhiqizwa okuthuthukisiwe. Ngenxa yokuphendula kwamadivaysi e-ultrasonic asethembekile angasebenza ngokulingana okukhulu - njengendlela yokuqhuma noma njengenqubo eqhubekayo ekwenzeni umonakalo weselula.
Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic ye-Biofuels
Umkhakha wamandla unikeza izicelo eziningi zokusetshenziswa okuphumelelayo nokusebenza kahle kwe-ultrasonics. Isicelo esithandwa kakhulu futhi sazi kahle kungenzeka ukuthi i-ultrasonically isize Biodiesel ukukhiqizwa (ukuguqulwa kwe-transesterification kusuka kumafutha omuthi noma asetshenzisiwe / okusetshenzisiwe (i-UVO; i-WVO) / amafutha ezilwane kuya ku-biodiesel), okuholela ekuvuneni okuphakeme nakwekhwalithi, ukusetshenziswa kwe-methanol encane nokuguqulwa okusheshayo okukhulu. Lapho i-biodiesel feedstock iqukethe ngaphezu kwama-2-3% wamafutha amahhala ama-acids (ama-FFAs), ukuqinisekiswa kwe-asidi kuyisinyathelo esiwusizo esiphezulu sokugwema ukwakheka kwensipho ephezulu. Ngaphandle kwe ukuguqulwa kwe-transesterification kanye nezinqubo ze-esterification, amandla amakhulu e-ultrasound asekela ukukhipha kwamafutha avela kwezitshalo (isb. i-rapeseed, i-soy, i-canola, i-corn, isundu, i-peanut, i-coconut, i-jatropha njll), noma i-algae.
I-Bioethanol i-fuel fuel etholakala lapho isitashi kanye noshukela wezitshalo, izitshalo, amazambane, umoba, ilayisi njll, kuvutshwa yimvubelo yamangqamuzana ibe yi-ethanol. Ngokusetshenziswa kwamandla ultrasonics, amangqamuzana esitshalo aphazanyiswa futhi impahla ye-intracellular ikhishwa ukuze i-feedstock itholakale kangcono ekugayeni kwe-enzymatic. Ngalokho, isitashi kanye noshukela zitholakala kangcono ukuvutshelwa okubangelwa ukuguqulwa okusheshayo nangokwedlulele nokuvunwa okuphezulu.
I-Ultrasonics e-Fuel, Amandla, i-Oyili neGesi
I-ultrasonic homogenizing inqubo iphumelela kakhulu ekukhiqizeni imimulsions ezinzile futhi engazinzile, evumela ukuthi kudalwe ngempumelelo aquafuels. Ngakho-ke, amakhemikhali amakhemikhali anzima kakhulu afana ne-diesel yemikhumbi i-emulsified ngamanzi. Ukusetshenziswa kwamaphethiloli okufakelwa kwamanzi kuphumela ekushiseni okubaluleke nakakhulu nokunciphisa okukhulu kwe-NOx ukuphuma. Enye insimu ebalulekile yiyona Ukwelashwa kwe-ultrasonic kwamalahle.
Izinqubo ze-ultrasonic ku-Food, Dairy and Beverage Manufacturing
Ukucubungula ukudla okuncane kubaluleke ngokwengeziwe ngenxa yokufuna kwamakhasimende okwenyuka okusha, ikakhulukazi ukudla okungokwemvelo. Ngakho-ke, ngezinyathelo ezivamile zokucubungula ezifana nokuxuba & homogenization, isizinda, ukuqiniswa & ukulondolozwa, izindlela zendabuko zishintshwa ngokuphindaphindiwe ngezinqubo ezintsha zokucubungula ezifana ne-ultrasonication, okuyinto indlela engeyona ye-thermal yokudla. Izinzuzo ze-sonication zisekelwe ekusebenzeni kwayo okuncane, okusheshayo nokuhlanzekile, okuholela ekulahlekelweni komkhiqizo omncane kanye nokuthuthukiswa kwekhwalithi yokudla ngokugcina ama-freshness namavithamini. Amaphrosesa ase-Hielscher ase-ultrasonic asetshenziselwa izicelo eziningi ezimboni zokudla ezifana nokulondolozwa & inactivation microbial, homogenization, ukuzinza & ukulondolozwa kwamanzi, ama-pures kanye Smoothies, ukukhipha ama-flavour kanye ne-fructose (ushukela), ukukhipha isisindo kwe-viscosity ukunciphisa, ukuvuthwa iwayini futhi uviniga obhalsamu, ukuhlunga utshwala & ukunambitheka, i-emulsions yamafu, i-ayisikhilimu (ukugqugquzela i-nucleation ye-ice nokudluliswa kwamaningi), isisindo se-algae se-nutraceuticals, ukuhlanganisa ushokoledi ukuphuza amakristalu okushukela, ukuqubuka kwamanzi uju, ukuhlanzwa kwamafutha adle … Funda kabanzi mayelana ne-ultrasonics yokudla nesiphuzo!